Shir caalami ah oo mashaqada Itobiya looga doodaya oo Jaamacada Stanford maalinkii 2-aad kasocda. | ogaden24
Shir caalami ah oo mashaqada Itobiya looga doodaya oo Jaamacada Stanford maalinkii 2-aad kasocda.
Dalka Maraykanka waxaa si rasmi ah uga Furmay shir looga doodayo xaalada Qalafsan ee dalka Itobiya kajirta ee kadhalatay dagaalada ay wadaan Jabhadaha Hubaysan iyo kacdoonka dadwayne.
Shirka oo ay Qayb kayihiin Hay’ado caalami ah siyaasiyiin Khuburo kale mucaaradka kala duwan oo ay ugu Horeeyan Jabahadaha ka halgama Itoobiya, ayaa ka furmay Jaamacada caanka ah ee Stanford University ee wadanka Maraykanka .
Shirkan ayaa waxaa si rasmi ah loogu marti qaaday Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya waxaana ka qayb galay wafdi uu hogaaminahayo Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Dibadda ONLF mudane Abdirahmaan sheekh Mahdi (Maaday) waxaana ku wehelliyay gudoomiyaha hogaanka Warfaafinta ONLF Mudane Hassan Moalin iyo masuuliyin kale.
Shirka oo bilawday maalinimadii shalay ahayd ayna soo diyaariyeen Golaha Qurba Joogta Itobiya oo kaashanaya Khubaro ku xeel dheer cilmi baadhista oo katirsan Stanford University, ayaa maanta oo Axadna ahna socon doona Labada Galin ba si si rasmi ah loogu soo bandhigo xudunta dhibaatada Itobiya iyo cilmi baadhisaha lasameeyay Natiijada kasoo baxda.
Shirka ayaa Qayb kanoqonaya dadaalada kala duwan ee ay wadaan mucaaradka Qurba Joogta ah ee doonaya in dhibaatada Woyanuhu kuhayo shucuubta kuhoos Jirto loo bandhigo dalalka dunida, gaar ahaan kuwa ree Galbeedka oo ah kuwa siiya dhaqaalaha ugu badan ee maamulkaasi ku Taagan yahay.